Tatitry ny mpisera (Netizen Report) : Henjehin’i Shina amin’ny sivana mitsitapitapy ireo mpampiasa aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2019 12:23 GMT
Nandray anjara tamin'ny fandrafetana ity tatitra ity i Renata Avila, Hae-in Lim, Lisa Ferguson, Ellery Roberts Biddle ary Myers West .
Nandritra ny vanimpotoana nialoha ilay fankalazàna, tany am-piandohan'ny volana Jona 2014, marobe ireo tolotra Google, ka isan'ireny ny Google.com, Google Translate sy Gmail, no voabahana tao amin'ny tanibe Shina. Ny herinandro talohan'izao, naverina ny fahafahana miditra tamin'ireo tolotra ireo, ora vitsivitsy, talohan'ny namerenana indray ny fibahanana azy.
Nisy fandalinana iray nivoaka tamin'ny herinandro lasa, avy amin'ny Citizen Lab, milaza fa tsy afaka nidirana ihany koa tany amin'ny faritra sasantsasany tao amin'ny firenena ireo fampiasa firesahana amin'ny finday KakaoTalk sy LINE, ary ny OneDrive sy Flickr. Etsy andaniny, nofafàna tao amin'ny sehatra shinoa mpaninjara fampiasa amin'ny Android ny Instagram. Hatreto, mbola azo atao ny mahita io tolotra io amin'ny alàlan'ny App Store iOS an'ny Apple sy ireo fitety.
Ao Tiorkia, manamarika ireo ONG hoe nividy fitaovana hanarahana maso ny tambajotra sosialy sy hibahanana sasantsasany amin'ny tranonkala ny Turk Telekom, ilay lehibe indrindra amin'ny fanomezana tolotra fifandraisandavitra. Misy vondrona iray ahitàna ireo fikambanana avy amin'ny sivily, isan'izany ny Fikambanan'ireo Mpitantana Tranomboky, ny fikambanana'ireo mpisolovava ao Ankara ary ny Antoko Pirate ao an-toerana, namoaka fanambaràna iray niombonana [teny tiorka] manondro izany ho toy ny fanitsakitsahana ny fahalalahana iantohan'ny Lalam-panorenan'ny firenena.
Ny 12 Jolay, niainan'i Siria ny santatry ny fahatapahana tanteraky ny aterineto tao aminy, hatramin'ny Mai 2013. Loharano marobe no nanamarika fa tsy nandeha intsony nanerana ny firenena ny aterineto, efa ho ora roa. Hatramin'ny Alatsinainy maraina no tsy afaka nifandray ny tao amin'ny faritra Alep sy ny avaratr'i Siria, hoy ny Renesys, vondrona mpanaramaso ny fifamoivoizana ao anaty aterneto. Vinavinan'ireo manampahaizana mankana ny hoe natao hiadiana amin'ilay vondrona islamika mpampihorohoro ISIS ilay fanapahana, ISIS izay mampiasa ireo tambajotra sosialy mba hanelezana ny hafatra avy aminy.
Tamin'ny Alahady, noteterin'ny masoivohom-baovao iraniàna fa nisy valo ireo mpandrindra vondrona anaty Facebook no nenjehina sy nohelohina sazy 8 hatramin'ny 21 taona an-tranimaizina noho ny « fikononkononana sy famoriambahoaka manohintohina ny filaminam-pirenena, hetsika fampielezankevitra manohitra ny rafitra, fanivaivàna ireo famantarana masina, ny rafi-pitsaràna ary ireo olona manana ny toerany manokana ».Zara raha misy ny vaovao azo raisina mba miresaka ity raharaha ity.
Efa herintaona mahery no mifonja any Tadjikistana i Alexander Sodiqov, toniandahatsoratry ny Global Voices ary mpianatra manomana diplaoma PhD ao amin'ny Oniversite-n'i Toronto. Afaka mahazo torohay mismisy kokoa momba ny zavamisy sy ireo ezaka atao mba hitakiana ny famotsorana azy ianareo ato.
Amin'ny faran'ny Aogositra, hobahanan'i Singapour ny fahafahana miditra amin'ireo tranonkala fifampizaràna failo ahafahana mifanakalo votoaty voaaron'ny zon'ny mpamorona. Misy fanavaozana vaovao natao amin'ireo lalàna momba ny zon'ny mpamorona. hanome fahafahana ho an'ireo tompon-jo amin'ny votoaty voaresaka mba haka didim-pitsaràna hitakiana amin'ireo mpanome tolotra aterineto (FAI) hibahana ireo tranonkala toy ny The Pirate Bay sy ny Kickass Torrents. Amin'izao fotoana izao, azon'izy ireo atao ny mangataka amin'ireo FAI hamafa ny fidirana amin'ireo votoaty ananan-dry zareo zo, kanefa tsy manery ny FAI kosa ny lalàna mba hanome valiny mahafapo an'ireny karazana fangatahana ireny. Tena vely kibay ho an'ireo mpankafy ny fifampizaràna failo ao Singapaoro io fanovàna ny politika mifandraika amin'ny zon'ny mpamorona io, izy ireo izay lohalaharana amin'ny fifamoivoizana raha BitTorrent no resahana.
Katsahan'i Arnel Ty, lefitry ny mpitarika ireo antoko vitsy an'isa ao amin'ny parlemanta ao Filipina, ny hampanaraka ny toetrandro ny fepetra mifandraika amin'ny fifaindraisandavitra, amin'ny fanondrotana ny sazy ara-bola ambony indrindra takiana amin'ireo mpanome tolotra aterineto izay manome hafainganana ambany loatra, tsy ho 200 intsony fa ho 50 tapitrisa pesos (1 tapitrisa dolara eo ho eo). Horaisin'ilay lalàna vaovao ho toy ny “tolotra fototra” ny fahafahana miditra amin'ny aterineto haingam-pandeha, ankoatra ny SMs sy ny antso. Efa nisy fitakiaa iray nataon'i Arnel Ty nitakiana ny fanokafana fanadihadiana momba ny fiharatsian'ny tolotra omen'ireo orinasam-pifandraisandavitra ao Filipina. Miaraka amin'ny salan'ny hafainganam-pifandraisana 3,6 Mbit/s, i Filipina no manana Iaterineto mihisatra indrindra a anatin'ny Fikambanan'ireo firenena ao Azia Atsimo – Atsinanana. 12,4 Mbit/s ny sala ho an'io faritra io.
Google miomana ny hanova ny ^politikany ary hamela ireo mpisera aterineto hampiasa ny anarana tian-dry zareo ho an'ireo tolotra rehetra misy ao anatiny. Nampidirina tamin'ny 2011, niteraka adihevitra nvaivay io plitika io, momba ny tsy fitononana anarana sy ny zo hanana fiainana manokana ety anaty tambajotra, momba ireo fahalalàna tsotsotra fototr'ireo fanontaniana mifandray amin'ny fahalalahana nomerika, izay mbola toa anaty sain'ny maro ao anatin'ny vanimpotoana taorian'i Snowden. Tanaty lahatsoratra iray tao anatin'ny ZDnet, Violet Blue niverina haingana amin'ny tantaran'ireo nymwars (fifandirana mifandraika amin'ny maripamantarana ireo mpampiasa aterineto) sy mizata fisaintsainana vitsivitsy momba izay dikan'io fiovàna io ho an'ny fifandraisan'ny Google sy ireo mpampiasa ny tolotra omeny.
Ao anatin'ny fanentanana Web 25 Tana Nihetsehana, nambaran'ny hetsika The Web We Want ny fametrahana ireo fanohanana ara-bola bitika ho fankasitrahana ny fikarakaràna hetsika fankalazàna tsingerintaona na hetsika izay anasàna ireo lmpandray anjara mba hisaina ny Tranonkala tian-dry zareo hisy. Tao anatin'ireo tolokevitra voaray, hita ao ny fihaonambe atokana ho an'ny fanoratana soramiafina nokarakarain'ilay meksikàna hackerspace Rancho Electronico, ny fitondràna fiarabe mitety an'i Pays-Bas nataon'ny Privacy Cafe ary ny fanentanana iray natomboky ny rantsana pakistaney an'ny Digital Rights Foundation izay mkendry ny hiditra hifandray amin'ireo vehivavy any amin'ireo faritra ambanivohitra ao amin'ny firenena no sady hanetana azy ireny hampiasa amin'ny fomba voalanjalanja ny Web ary ny fiarovana ny fianan-dry zareo manokana.
9 ora izayEtiopia